Linq: Mpanome kara-pifandraisana amin'ny kariera akaiky anao (NFC) | Martech Zone
Raha mpamaky ny tranokalako efa ela ianao dia fantatrao fa faly be aho mahita ireo kara-pifandraisana isan-karazany. Manana karatra fanamarihana paositra aho, karatra toradroa, karatra vy, karatra misy laminy… Ankafiziko tokoa. Mazava ho azy, miaraka amin'ny hidin-trano sy ny tsy fahafahany mandeha, tsy dia nilaina loatra ny karatra fandraharahana. Ankehitriny dia misokatra ny dia, na izany aza, nanapa-kevitra aho fa tonga ny fotoana hanavaozana ny karako ary hakako araka ny filaharany.
Ny zavatra iray hatahorako foana dia ny isan'ny karatra orinasa hividianana sy ny isan'ny hitondrana isaky ny hetsika. Mandra-pahatongan'ny zava-nitranga Linq. Linq dia manana tsipika tsy manam-paharoa amin'ny vokatra karatra nomerika niomerika izay nampidirina NFC. Raha efa nanaraka ahy nandritra ny fotoana kelikely ianao dia ho fantatrao fa nanandrana karazana karatra NFC taloha aho fa tsy nety. Ny orinasa dia nanana olana maro tamin'ny fanontana azy ireo ary avy eo ny URL ahatongavana dia kely noho ny miavaka.
Hafa kosa i Linq, mampiditra fampiharana finday hananganana pejy fitobiana fototra maimaimpoana (na pejy misy karama miaraka amin'ny fanavaozana tsara) ary koa karazana fitaovana azonao vidiana izay tafiditra ao anaty NFC. Ny pejin-tranonao dia afaka manana rohy mombamomba anao, rohy fandoavam-bola (Venmo, PayPal, na CashApp), ary ahafahan'ny mpitsidika misintona ny karatra fifandraisanao amin'ny fampidirana anao mivantana amin'ireo mpifandray aminy.
Miaraka amin'ny Linq Pro, famandrihana ny vokatra Leap, azonao atao koa ny:
Mametraha pejy fitodiana tianao ao anatin'ny dingana safidy.
Manampia atiny fanampiny amin'ny pejin-tranonao Linq. Nanampy horonantsary YouTube aho fa azonao atao koa ny manampy rohy fihaonana, Spotify na mpilalao Soundcloud.
Manampia endrika ao amin'ny pejinao hahazoana fampahalalana fanampiny.
Azoko atao ny manangana a miaraka amin'ny karatra Premium sy ny fanaingoana sasany karatra fanao mahazatra miaraka amin'ny sary famantarana ahy (sary etsy ambony) ahafahako mifikitra tsotra fotsiny amin'ny fantson-telefaonako ary avy eo misintona isaky ny misy mangataka na atolotro ny karatro. Raha tokony hanome karatra fandraharahana ho an'ny tsirairay aho dia azoko atao ny manindry azy amin'ny telefaonin'izy ireo na afaka manara-maso ny kaody QR ao ambadika izy ireo ary entina any amin'ny pejy fandraisana miaraka amin'ny mombamomba ahy rehetra ary koa rohy fampidinana fifandraisana hampidirana ny Mifandraisa mivantana amin'ny telefaonin'izy ireo!
Douglas KarrPejy fitobiana ao amin'ny Linq
Tsy manolotra ny karatra premium novidiko fotsiny i Linq, fa tena misy fisafidianana vokatra azo isafidianana:
Karatra Linq - safidy maromaro ho an'ny karatra fampiasana tokana ahafahanao mahazo azy ireo tsotra, asio pirinty eo aminy ny sary famantarana anao, na manana endrika manokana.
Linq Fehin-tànana - fehin-tànana tsotra izay nampidirina NFC… tsindrio fotsiny ny fehin-tànana amin'ny telefaonao ary misokatra ny pejy itodiana.
Linq Band ho an'ny Apple Watch - tarika Apple Watch izay nampidirina NFC… tsindrio fotsiny ny tarika amin'ny telefaoninao ary hisokatra ny pejy itodiana.
Hub misy rohy - Birao birao na countertop hub izay alefa ny NFC ary misy kaody QR ao aminy ho an'ireo olona mitsidika ny latabatrao na ny booth.
Rohy tap - bokotra NFC kely milay izay azonao apetaka ao ambadiky ny telefaona findainao na findainao. Ireo dia azo namboarina tamin'ny kaody QR na ny sary famantarana anao.
Linq ho an'ny ekipa
Linq ho an'ny ekipa dia ahafahanao manara-maso ny fahombiazan'ny ekipanao rehefa mizara ny mombamomba azy ireo amin'ny hafa.
Linq ho an'ny hetsika
Raha manao hetsika ara-tsosialy ianao dia manolotra marika sy foibe ho an'ireo mpanatrika sy mpivarotra i Linq. Azonao atao ny manara-maso ny fifandraisana sy ny fifamatorana amin'ireo mpanatrika, mpanohana ary mpivarotra!
Fantaro bebe kokoa ny momba ny vokatra sy ny tolotra an'i Linq ao amin'ny magazay an-tserasera:
Fampahafantarana: nisoratra anarana amin'ny maha masoivohon'i Linq ahy aho ary mampiasa ny rohy mpampifandray ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: Androidkaratra fandraharahanaapp volakaratra fifandraisanafifandraisana rakitracontact informationiPhone iosdinganalinqlinq pronfcbandy paoma nfcnfc fehin-tànanakaratra orinasa nfckaratra orinasa nfcbokotra nfcho avy